"Egwuru egwu" ya na ndi isi oru. Ọ na-akawanye ụtọ na ntụrụndụ? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » "Egwuru egwu" ya na ndi isi oru. Ọ na-akawanye ụtọ na ntụrụndụ?
Kemgbe ọtụtụ afọ, a na-eme nyocha iji ghọta ma ọrụ ndị isi nwere ike ịzụ na n'okpuru ọnọdụ ndị dị a .aa. Anyị kwurịtara maka ya oge ụfọdụ, ma n'ihe metụtara ọgbọ ụlọ akwụkwọ ọta akara (dịka ọmụmaatụ qui), na mmekọrita na afọ ụlọ akwụkwọ (dịka ọmụmaatụ qui).
Ayi ahuwo na enwere ike doghachi ezi ihe di na ba uba.ụlọ akwụkwọ ọta akara e na ụlọ akwụkwọ praịmarị na nke etiti) dị na nghota ederede.
Obi abụọ adịghị ya, ndị ahụ lekwasịrị anya ebe nchekwa Ọ bụ ọgwụgwọ nke ndị isi ọrụ nke ọtụtụ ndị nyochachara. Ma ọ bụghị ihe mberede ka anyị mere ka anyị nwee ya ọtụtụ ngwa n'ịntanetị iji zụọ ebe nchekwa ọrụ, n'ọtụtụ oge dabere na ya akaebe site na akwụkwọ sayensị.
Taa, anyị tinye akụkụ ọzọ na ihe ọmụma banyere isiokwu.
N’edemede sayensi bipụtara n’afọ 2019 Anwalewo hypothesis na-atọ ụtọ: ịme ọgwụgwọ ụdị egwuregwu dịka ọ na-eme ka ọ baa arụ?
Iji zaa ajụjụ a, Johann na Karbach enyefewo ọtụtụ ụmụaka maka ule dị iche iche iji nyochaa ọrụ nchịkwa na mmụta ụlọ akwụkwọ (ọgụgụ na mgbakọ na mwepụ); ekebiere, ekewa abuo:
Otu atọ wee nweta ọzụzụ n'otu akụrụngwa nke ndị isi ọrụ (igbochi ma ọ bụ ebe nchekwa na-arụ ọrụ ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe);
Ejiri otu 3 n’otu ọzụzụ ahụ mana ejiri egwu dị egwu, nke yiri egwuregwu vidiyo;
otu nzukọ emeghị ọzụzụ ọ bụla.
Na ngwụsị ọzụzụ a (ya bụ, mgbe usoro ọgwụgwọ 21 gachara) ha enyochagharị ha niile iji hụ mmezi na ọdịiche ọ bụla n'etiti ìgwè dị iche iche.
Gịnị ka ahụrụ?
aka ìgwè nke ọ bụla na-emeziwanye n’ihe ndị a zụrụ azụ nke ndị isi ọrụ (atụnyere mmetụta ya na ndị na-ahụ maka njikwa, ya bụ, nke na-emeghị ọzụzụ ọ bụla), na-enweghị ọdịiche nke arụmọrụ n’etiti ụmụaka na-enweta ọzụzụ ọkọlọtọ na ụmụaka ndị ji mmemme egwu.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Zụlite ma kwalite ọrụ ndị isi na Otu niile
Ndi iche ndi ozo putara na uzo ndi ozo:
Whomụaka ji ihe ahụ ụdị egwuregwu nke ọzụzụ ahụ kwuru na ha nwere mkpali karịa ịnọgide ọzụzụ.
Mụaka ndị jirila oge niile ụdị egwuregwu nke ọzụzụ ahụ gosipụtara mmelite niile kachasị agbanweghi na mmụta ụlọ akwụkwọ gbasara agụ; ọkachasị, ndị mechara mmụba nke mgbanwe mgbanwe ma ọ bụ inhibition nwetagoro mmezi na nghota ederede ebe a hụrụ mmezi ngwa ngwa ọgụgụ n'ime ndị zụrụ mgbochi ahụ.
Na ngwụcha ...
Dịka a tụlere n'isiokwu bu ụzọ, ọzụzụ ọrụ isi na-egosikwa na ọ na - enyere aka melite mmụta ụlọ akwụkwọ (yana melite ọrụ a zụrụ azụ). Ọ kachasị, ọ bụrụ na anyị ahụla na nti mmetụta nke nkwalite ebe nchekwa na-arụ ọrụ, na nke a anyị na-ahụ uru bara uru dịkwa na ọzụzụ nke mgbochi na mgbanwe mgbanwe.
Ọzọkwa, nyere nkwali dị elu nke ụmụaka kwupụtara na nnabata nke nsonaazụ ahụ, ọ dị ezigbo mkpa itinye ego oge na ike na-achọ ime ka ọgwụgwọ na-ekere òkè !
Dịka ọ na-esikarị, kwa, na nke a kwa, anyị na-agba ume ịkpachara anya n'ịsụgharị nsonaazụ; na nke a, n'eziokwu, ndị nyocha ahụ hapụrụ ọtụtụ obi abụọ n'ihi ọnọdụ nke nyocha ha: nke mbụ, ndị na-ahụ maka njikwa bụ "passive" ya mere na ọ gaghị ekwe omume ịkọpụta kpọmkwem nsonaazụ nke ọzụzụ ahụ; inwe obi abụọ banyere eziokwu ahụ bụ na ndị nyocha ahụ nyochaghị nsonaazụ ọ bụla "mbufe" (dịka ọmụmaatụ, onye zụrụ inhibition ahụ mekwara ka ebe nchekwa dị mma?); N’ikpeazu, amabeghị ihe kpatara ya, n’agbanyeghi na ị na-azụ otu ọrụ ọgụgụ isi (inhibition ma ọ bụ ebe nchekwa na-arụ ọrụ ma ọ bụ mgbanwe cognitive) ma nweta otu nsonaazụ na nnwale maka ọrụ ndị isi, naanị otu egwuregwu “egwuregwu” enwetaala mmelite na nka a na-enyeghị ọzụzụ ozugbo. (ọsọ nke ọgụgụ na nghọta nke ederede).
Also nwekwara ike inwe mmasị na: BIA - Batrị fortali maka ADHD: nyocha
N’agbanyeghi oke ikwuputaghi ihe ndia, nyocha a chere anyi ihu na nchebara echiche di nkpa n’ebe oru ogwu a: mgbe anyi n’eme umuaka, oge anyi ka anyi ji etinye ihe ha na eme? N'ime awa ndị na-adịghị agwụ agwụ ejiri atụmatụ na ịmepụta ọzụzụ nkeonwe na akparamagwa nke nwatakịrị, kedu ohere anyị ga-ahapụrụ maka ịme ihe? Ànyị na-enye egwuregwu dị mkpa zuru oke?
Anyị ji n'aka na ọtụtụ ndị ọkachamara achọghị nyocha ọ bụla iji mata etu mkpali ụmụaka si dị mkpa n'ọrụ anyị. Inwe nkwenye na nri maka iche echiche site na nyocha, na onodu obula, bara uru oru anyi.
Na Ọrụ GameCenter Executive ị ga-ahụ ọtụtụ ngagharị mmekọrịta na ntanetị n'efu na arụmọrụ ndị isi
Ebe nchekwa ọrụ: ọ ka mma iji bulie ya ngwa ngwa?
Nchikota agbakwunyere nke ebe nchekwa na oru mgbakọ na mwepu
Johann, VE, & Karbach, J. (2019). Mmetụta egwuregwu na ọzụzụ nchịkwa nchịkwa nchịkwa na njikwa ikike na ikike agụmakwụkwọ na ụmụaka ụlọ akwụkwọ elementrị. Science Development, e12866.
Karbach, J., Könen, T., & Spengler, M. (2017). Olee ndị kacha erite uru na ya? Ndiiche n’otu n’iru nyefe nkuzi ikike ijikwa onye isi. Journal nke Mmepe Enweta, 1(4), 394-405.
mgbanwe, ndi isi oru, ọrụ ndị isi na egwuregwu, mgbochi, ebe nchekwa, ndị isi na-ahụ maka ọgwụgwọ
"Egwuru egwu" ya na ndi isi oru. Ọ na-akawanye ụtọ na ntụrụndụ?2020-08-022020-08-03http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/giocare-con-le-funzioni-esecutive.jpg200px200px